१४ बर्षको उमेरमा जनयुद्ध लडेकी पम्फा १९ बर्षको हुँदा उपमेयर निर्वाचित !
ARCHIVE, COVER STORY » १४ बर्षको उमेरमा जनयुद्ध लडेकी पम्फा १९ बर्षको हुँदा उपमेयर निर्वाचित !
गोरखा - १४ बर्षकै कलोलो उमेरमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले संचालन गरेको युद्धमा छापामार भएर काम गरेकी पम्फा बसेलले चुनाव जितेकी छिन् । कांग्रेस उम्मेदवारलाई हराउँदै गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा उनले जीत हाँसील गरेकी हुन् ।
उनी अहिले २९ बर्षकी छिन् । उनको जीतसँगै उनी सबैभन्दा कान्छी महिला उपमेयर बनेकी छिन् । उनको यो जीतसँगै गोरखामा बिजयी जुलुस निस्केको छ भने उनको जीतको उत्सवमा गाउँलेहरुले उनको छापामार दैनिकीका बारेमा समेत चर्चा गरेका छन् ।
कांग्रेस उम्मेदवारलाई २ सय ९८ मतले हराँदै उनी विहीबार पालुङ्टार नगरपालिकाको उपमेयर पदमा जिजयी भएकी हुन् । कुल ४ हजार ४ सय ९४ मत पाएकी उनले खुला विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेर उनले अहिले प्सटु पास गरिसकेकी छन् ।